हामी किन रेल यात्रा गर्छन्? रेल यात्रा आराम छ, व्यावहारिक र अन्य परिवहन विधिहरू बस मेल खाँदैन सक्ने एउटा सामाजिक पक्ष प्रदान गर्दछ. तथापि, यात्रा एक अशक्तता केही गर्न मुश्किल हुन सक्छ. यसको मतलब यो होइन तपाई रमाईलो गर्न सक्नुहुन्न, हुनत. यो लेख तपाईं को आवश्यकता केही आधारभूत क्षेत्रमा प्रदान गर्दछ योजना गर्दा विचार आफ्नो रेल यात्रा त्यसैले यात्रा युरोप मा एक अशक्तता संग कम तनावपूर्ण छ.
कुन ट्रेन बचाउने-ए-ट्रेन मा लिने यदि तपाईं एक अशक्तताको साथ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ?
एक अशक्तता सेवा संग विशेष यात्रा एक क्षेत्रबाट अर्को फरक हुन सक्छ, धेरै मापदण्डमा निर्भर गर्दै; आफ्नो विशेष रेल मा कार, विभिन्न मा सुविधाहरु स्टेशन तपाईंको मार्गमा, र पहुँचतामा पनि तपाईंको क्यारियर नीति.
एक पटक तपाईले तिनीहरुलाई प्राप्त गर्नुभए पछि तपाईको टिकट र इटाइनरी जाँच गर्नुहोस्. तपाईं आफ्नो विभिन्न stopovers मा हैरानी छैन भनेर तपाईं आफ्नो नीति र प्रावधान संग आराम गर्दै छन् सुनिश्चित (विशेष गरी जब विदेशी यात्रा).
शहर को सबै भन्दा सुलभ भागहरु मा रहन. यो एक अशक्तताको साथ यात्रा गर्दा तपाईंको रेल यात्राको योजना बनाउनको सबैभन्दा गाह्रो अंश हो. तपाईं एक ठूलो पहुँच होटल फेला हुन सक्छ, तर तपाईं हिंड्न गर्दा के पाउनुहुनेछ / अगाडि ढोका बाहिर रोल? त्यहाँ सबै दिशामा पहाड र सिढी हो? तपाईं cobblestones भन्दा रोल हुनेछ? त्यहाँ पहुँच रेस्टुरेन्ट नजिकै? यो होटल छिमेकी अनुसन्धान गर्न महत्वपूर्ण छ. तिमी प्रयोग गर्नसक्छौ Google नक्सा सडक दृश्य देशमा को Lay प्राप्त गर्न, त्यसपछि आफ्नो प्रश्न संग होटल इमेल.
तपाईं बीचमा तपाईंको रेल टिकटहरू अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ युरोप मा सबै भन्दा छिटो रेल मा सुरक्षित-एक-ट्रेन लगभग हरेक गन्तव्य मा माथि enlisted3मिनेट, मा सस्ता रेल टिकट दर र obnoxious बुकिंग शुल्क को राहत!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ?, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-disability-europe%2F%0A%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)